Olee otú ike DVD si mp4 na iDVD
Ha na-ekwu na ihe ọma na-abịa obere nchịkọta, ihe nlereanya kasị mma nke ahụ ga-abụ anyị nnọọ onwe DVD. Ọ bụ obere, obere na ya mere nnọọ mfe ebu gburugburu. A DVD ma ọ bụ Digital vasatail Disc bụ nnọọ n'ụzọ zuru okè na ịkọrọ ọkacha mmasị gị na fim, foto, egwuregwu na ọtụtụ ndị ọzọ na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ, karịsịa mgbe ị na-achọghị ka a nsogbu na nnweta internet ma ọ bụ WiFi mgbe ịga ha.
The DVD bụ dakọtara na bụla dakọtara oghere dị ka onye na a raara onwe ya nye DVD ọkpụkpọ na kọmputa gị na-eme ka ọ n'ezie ibu vasatail. Plus, ị nwere ike na-ebu a bukwanu na nnukwu ego nke data dị otú ahụ a obere ohere, na nke ahụ bụ nanị nnọọ uru. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya ịhụ DVD a na-eji ọtụtụ mgbe ọ bụla ha mkpa ịkọrọ ihe na onye ọ bụla ka ndị dị otú ahụ.
Ebe kwuru na, taa, anyị na-aga a lee anya na otú ị nwere ike ịmepụta a DVD si mp4 iji iDVD. iDVD bụ ngwá ọrụ nke na-abịa tinyere Mac kọmputa, nke-enye gị ka ọkụ ọtụtụ faịlụ, videos, fim, ihe oyiyi na ndị ọzọ n'ime a DVD na mgbe e mesịrị na DVD nwere ike na-egwuri na ọ bụla igwe ahụ nke nwere DVD oghere na ya. Ọ bụ ihe magburu onwe software dị ka DVD na ọ na-emepụta na-dakọtara na ọtụtụ ndị igwe si n'ebe.
MPEG-4 Part 14 ma ọ bụ mp4 dị ka ọ na a na-akpọkarị, bụ dijitalụ multimedia format na-akacha eji maka na ịchekwa ọdịyo na video. Ọ na-ahapụ gị na-echekwa ndepụta okwu dị ka mkpa. Ọtụtụ n'ime ndị na fim na obere mkpachị ụbọchị ndị a dị na mp4 format na ya mere ị na-yikarịrị ka na-ahụ na video ma ọ bụ ihe nkiri na ị chọrọ ka ọkụ na òkè bụkwa na nke a usoro.
Iji ike na DVD si mp4, anyị ga-achọ na 2 esonụ na ọnọdụ na ya na-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru.
Ọnọdụ 1 - Your mp4 nwere ike dị ka iDVD
Ọ bụrụ na ị na-enwe ike igwu egwu gị mp4 faịlụ site na iji QuickTime, ị ga-enwe ike imeghe ya na iDVD nakwa na mfe gbaa ya jidesie a DVD. Lee ndị nzọụkwụ aka.
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori iDVD - Ọ bụrụ na ị na-adịghị iDVD arụnyere ugbua, pịa a njikọ ibudata na wụnye ya na kọmputa gị. Ozugbo mere, pịa na iDVD icon ka e gosiri n'okpuru ẹkedori ma ọ bụ imeghe ya.
Mgbe ulo oru ngwa kwesịrị imeghe elu dị ka e gosiri ndị na-esonụ screenshot.
Nzọụkwụ 2: Họrọ 'OneStep DVD' - Ugbu a, gaa na nhọrọ File> 'OneStep DVD si Movie ...' site File menu ma ọ bụ ị pụrụ ọbụna pịa na nhọrọ nyere na isi window.
Nzọụkwụ 3: Họrọ mp4 faịlụ - Ugbu a, họrọ mp4 faịlụ na ị ga-achọ-erekwa ọkụ DVD, na pịa na 'Import' button.
Nzọụkwụ 4: Fanye DVD - Ọ bụrụ na ị na-adịghị ama ịtinye a recordable ma ọ bụ ide DVD maka ihe nkiri na-nsure, iDVD ga-ajụ gị ka ị na fanye ya mere na họrọ mp4 faịlụ nwere ike nsure jidesie ya.
Nzọụkwụ 5: Ka iDVD-eme ihe niile ugbu a - Ozugbo ị fanye recordable DVD, iDVD ga-aga n'ihu na-eme ndị needful na ya. Ngwa ga-akwadebe DVD-akpaghị aka, usoro ndị mp4 faịlụ na ị chọrọ nsure na na DVD, na n'ikpeazụ ọkụ ya nakwa-akpaghị aka.
Ka anya dị ka usoro a na okokụre, iDVD ga-akwado ya unu dị ka e gosiri screenshot n'okpuru. Pịa Emela button na DVD dị njikere na mp4 faịlụ nsure na ya n'ihi na ị na-elele na ihe ọ bụla kọmputa ma ọ bụ DVD Player.
Ọnọdụ 2 - Your mp4-apụghị dị ka iDVD
Ọ bụrụ na ndị mp4 faịlụ na ị chọrọ ike gị DVD na na-na-emegide iDVD, ị ga-enwe ike mbubata ya na iDVD. Na ikpe, ị ga-eji onye ọzọ n'aka-eke ndị DVD. Anyị ahụwo kasị mma usoro e nwere ime nnọọ otú ahụ ma aha ya bụ Wondershare Video Converter Ultimate. Ị nwere ike iji nke a excellently mere software ọkụ gị mp4 faịlụ jidesie a recordable DVD.
N'eziokwu, ọtụtụ ga-ahụ na-eke DVD na Wondershare Video Converter Ultimate nnọọ ihe dị mfe dị ka tụnyere na-eme ya na iDVD. Otu n'ime ihe ndị kasị mma bụ eziokwu na ọ dịghị incompatibility na software si Wondershare na Ọzọkwa, ọ na-enyekwa nza nke menu nhọrọ nakwa dị ka a usu edezi ngwaọrụ maka na ị mepụtara ahaziri DVD nke magburu onwe ya mma. Ka na-a ngwa ngwa anya na otú iji ya.
Nzọụkwụ 1 Import mp4 faịlụ
Pịa ebe a iji ibudata na wụnye Wondershare Video Converter Ultimate na kọmputa gị. Ozugbo mere, ẹkedori ngwa na họrọ Ọkụ taabụ si n'elu ngalaba nke interface. Ugbu a, ị pụrụ nanị ịdọrọ na dobe mp4 faịlụ na ị chọrọ iji. Site na ala nke interface ị nwere ike họrọ dị iche iche menu ndebiri ị chọrọ. Ị pụrụ ọbụna dezie, ewepụtụ, akuku gị video ma ọ bụ tinye sobtaitel, watermark na mmetụta na ya.
Nzọụkwụ 2 Ọkụ mp4 ka DVD
Ugbu a, site n'elu n'akụkụ nke ngwa window, họrọ onye ọ bụla n'ime nhọrọ - ọkụ ma ọ bụ Copy DVD na mgbe ahụ họrọ nhọrọ nke na-ere ọkụ na video ka DVD Disc. Ozugbo mere, nanị pịa apa button na ala n'aka nri n'akụkụ nke interface na-amalite apa ọkụ usoro.
Nke DVD Video Standards M Kwesịrị Jiri?
Olee otú iji tọghata DivX / XviD ka DVD
> Resource> DVD> Olee otú ike DVD si mp4 na iDVD